Jereo hoe inona no hatao ao amin'ny nosy Tenerife | Vaovao momba ny dia
Mandehana mitsangatsangana any Tenerife Hevitra lehibe izany, indrindra satria somary mora ny mahita tolotra amin'ny sidina mora vidina mba handehanana any amin'ny seranam-piaramanidina rehetra. Na hipetraka any Tenerife avaratra na any atsimo isika, dia hanana toerana ho hitan'ny maso sy zavatra hatao dieny izao.
Misy maro zavatra hatao any Tenerife, ankoatran'ny mankafy ny morontsiraka mahafinaritra. Nosy feno toerana voajanahary tsara tarehy izy, làlam-pandehanana ary tanàna kely mahafinaritra, noho izany dia tsy maintsy manao làlan-kaleha isika alohan'ny handehanana.
1 Tsidiho ny Teide National Park
2 Mialà sasatra any Playa de las Americas
3 Jereo ny trozona sy feso ao Adeje
4 Gaga any Los Gigantes
5 Ankafizo ao amin'ny Loro Parque
6 Jereo ny Cave of the Wind
7 Mandehandeha mamaky ny tendrombohitra Anaga
8 Mandehana fitsangatsanganana amin'ny alàlan'ny Barranco de Masca
9 Jereo ny ivon-tantara manan-tantara ao La Laguna
Tsidiho ny Teide National Park
Iray amin'ireo fitsidihana tsy tokony hohadinoina rehefa mandeha any Tenerife ny Teide National Park. Ity valan-javaboary ity dia manolotra endrika volkano izay toa nalaina avy tany Mars, ary koa vatolampy malaza sasany izay hakana sary mahazatra. Rehefa tonga any Teide ianao dia mila milahatra vao afaka miakara amin'ny fiara tariby. Dia lavitra ity alohan'ny hahatongavanao any an-tampony, izay ahitanao fahitana mahatalanjona matetika. Zava-dehibe ny mitondra zavatra mafana satria mangatsiaka sy be rivotra matetika izy io. Ankoatr'izay, raha te-hiakatra amin'ny faritra avo indrindra amin'ny volkano isika dia tsy maintsy mangataka izany mialoha.
Mialà sasatra any Playa de las Americas
Ny faritry Playa de las Américas dia tena mpizahatany ary velona. Misy faritra ara-barotra miaraka amin'ny trano fisakafoanana sy fivarotana ary koa ny morontsiraka mba hankafizanao ny toetr'andro tsara eto amin'ny nosy.
Jereo ny trozona sy feso ao Adeje
Iray amin'ireo fialam-boly tadiavina indrindra any Costa Adeje ny mijery feso feso sy trozona. Ny trozona dia tsy hita afa-tsy volana vitsivitsy amin'ny taona, fa mahazatra ny mahita feso, ka mendrika foana ny dia. Ao an-tanàna dia misy toerana maromaro hanakaramana ity karazana dia ity ary mora ny vidiny.
Gaga any Los Gigantes
Mandritra ny fotoana ahafahanao mahita cetaceans ao Adeje, dia hitsangatsangana eo ambanin'ny hantsana mahavariana ao Los Gigantes. Raha ny mahazatra, ny dia an-tsambo dia ahitana mitaingina miaraka fahitana hantsana, izay mahavariana. Matetika koa izy ireo dia mijanona ao anaty cove mba handro sy hisakafo.
Ankafizo ao amin'ny Loro Parque
Ho an'ireo izay tia biby na mandeha mianakavy dia iray amin'ireo fialamboly eto amin'ny nosy Loro Parque. Ity toerana ity dia fanangonana zavamaniry tropikaly tsy miankina sy zoo. Any Puerto de la Cruz no misy azy, any avaratry Tenerife. Gorillas, jaguars ary na ny feso aza sy ny trozona mpamono dia hita ao amin'ny zoo.
Jereo ny Cave of the Wind
Ny Cave of the Wind dia lavaka amin'ny atin'ny tany miendrika fantsona volkano tamin'ny fipoahana nitranga an'arivony taona lasa izay. Ireo zohy dia manana faritra kely azo tsidihina, metatra vitsivitsy. Ao amin'ireo fitsangatsanganana misy torolàlana dia misy hetsika hafa atao, toy ny fitsangatsanganana anaty ala sy fitaterana mankany anaty lava-bato.
Mandehandeha mamaky ny tendrombohitra Anaga
Ny faritra Anaga dia a Tahiry voajanahary amin'ny biosfera ary izy dia massif be tendrombohitra any avaratry ny nosy. Amin'ity faritra an-tendrombohitra ity dia misy làlana maromaro handehanana amin'ny lalana eo afovoan'ny natiora. Araka ny efa nolazainay, ity dia iray amin'ireo hetsika goavambe eto amin'ny nosy aorian'ny fandehanana amoron-dranomasina, indrindra raha mandeha amin'ny ririnina isika. Ny lalan'ny 'The Enchanted Forest' dia iray amin'ireo notadiavina indrindra ary notsidihina indrindra, fa raha afaka mandeha an'io dia tsy maintsy mangataka alalana mialoha ianao, satria misy vondrona kely atao. Zava-dehibe ny mangataka alalana mialoha, indrindra amin'ny vanim-potoana lehibe.
Mandehana fitsangatsanganana amin'ny alàlan'ny Barranco de Masca
Mitaingina a lalana mamakivaky ny Barranco de Masca Iray amin'ireo fitsangatsanganana malaza indrindra io. Ny làlana dia miditra amin'ny lohasaha avy ao amin'ny trano fiompiana Masca hidina any amin'ny faritra amoron-dranomasina, izay misy sambo miandry matetika haka ireo izay mandeha. Maharitra adiny telo eo ary maharitra dimy kilometatra ny velarany. Ny sambo dia mamerina ny mpizahatany any amin'ny faritra Los Gigantes. Tena mpizahan-tany ity faritra ity noho izany, noho ny cetaceans sy ny hantsana Los Gigantes.
Jereo ny ivon-tantara manan-tantara ao La Laguna
Ny foibe manan-tantara an'ny San Cristobal de La Laguna Nambaran'ny UNESCO ho vakoka manerantany. Ity no renivohitr'i Tenerife ary koa an'ny Gran Canaria rehetra. Ao amin'ny foibe manan-tantara dia misongadina ireo trano tranainy izay tena voatahiry tsara, miaraka amin'ny lokony sy ny rafitry ny hazo. Io lafiny mitandrina io no mampiavaka ity tanàna taloha ity, tanàna iray mendrika ny hitsidika ny lanjany ara-tantara, hatramin'ny taonjato maro lasa izay ny aristokrasia kanadiana iray manontolo dia tao amin'ireo trano ireo.